SM Entertainmentရဲ့ New Girl Group မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်လာလိမ့်မလဲ? - Pop Channel
SM Entertainmentရဲ့ New Girl Group မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်လာလိမ့်မလဲ?
SM Entertainment ရဲ့ ပွဲဦးမထွက်ရသေးတဲ့ trainee တွေစုစည်းထားတဲ့ SM Rookie ဆိုတဲ့ teamမှာ တစ်ချိန်က အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အလားအလာကောင်းတဲ့ female trainee တွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ Herin, Yiyang, Koeun, Lami, Hina တို့လို အရည်အချင်းရှိသူတွေ Entertainmentကို စွန့်ခွာသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက နောက်လာမယ့် girl group မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ Entertainment မှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လူသိများတဲ့ trainee သုံးဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Jimin (full name-Yoo Jimin) ဟာ SM Entertainmentရဲ့ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် trainee တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Jimin ဟာ 2016-2017 ခန့်က SM Entertainment ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ Trainee မဖြစ်ခင်တည်းက ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူသိများကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
SHINee’s Taemin ရဲ့ “Want” Comeback မှာလည်း female dancer အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Jimin ရဲ့ထူးချွန်တဲ့အကစွမ်းရည်ကြောင့် ပွဲဦးထွက်တဲ့အခါမှာ dance line နေရာကပါဝင်နိုင်ဖို့ ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Jimin ဟာ ဒီလအစောပိုင်းမှာ EXO, NCT နဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝေဖန်တဲ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံခဲ့ရကာ အရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲ SM Entertainmentက ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး မဟုတ်မမှန်ကောလာဟလဖြန့်ဝေသူများကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Helen (full name- Lee Hyejin) ကတော့ SM Entertainmentရဲ့ ဆယ့်ခုနစ်နှစ်အရွယ် trainee လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Helen ကို တောင်ကိုရီးယားမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် လေးနှစ်အရွယ်တည်းက ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Brisbaneကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဆိုးလ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ SM Entertainmentမှာ Audition မဖြေခင်အထိ SL Studio Academy မှာ training ဆင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
Helen ဟာ 2019 ဒီဇင်ဘာလမှာ SM Entertainmentနဲ့ စတင် join ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလခန့်က Pocket TV ရဲ့ YouTube video တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ How to passaK-Pop Audition” ဆိုတဲ့ video မှာ Helenဟာ သူ့ရဲ့ အကစွမ်းရည်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။
Helenတစ်ယောက် SM Entertainment ရဲ့ new girl group မှာသာ ပွဲဦးထွက်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် Dance line တစ်နေရာကနေ ပါဝင်သွားနိုင်ဖို့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Ningning (full name- Ning Yizhuo) ကတော့ SM Rookie ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ခုနစ်နှစ်အရွယ် trainee လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Ningningဟာ Entertainmentကို 2016 ခုနှစ်က join လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလမှာပဲ SM Rookie ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသူပါ။
Ningning ကို တရုတ်နိုင်ငံ Harbinမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိ SM Entertainment ရဲ့ ကိုရီးယားမဟုတ်တဲ့လူမျိုးခြားတွေထဲက တစ်ဦးတည်းသော လူသိများကျော်ကြားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
Ningningဟာ ကုမ္ပဏီနဲ့မ joinခင်မှာ Zhejiang TV ရဲ့ Let’s Sing Kids ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူဟာ NCT နဲ့ BLACKPINK ရဲ့ အမာခံပရိသတ်အကြီးစားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ Bias ကတော့ Renjun နဲ့ Jennieတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ningningကို new girl group မှာ vocal line နေရာကနေ ပွဲဦးထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
SM Entertainmentမှာ Jimin, Helen, Ningning တို့အပြင် အခြားနာမည်ထွက်နေတဲ့ trainee များလည်းရှိပါသေးတယ်။ ထိုင်းလူမျိုး traineeများဖြစ်ကြတဲ့ R-Jing, Plu နဲ့ Daisy တို့သုံးဦးကိုလည်းထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိတော့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တိကျတဲ့အတည်ပြုချက်တွေ ထုတ်ပြန်ပေးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
K-Pop လောကမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Fan တွေနဲ့ Netizen တွေကြားက အငြင်းပွားမှုများ
‘Dynamite’ နှင့်အတူ Music Show Win ခဲ့ပြန်တဲ့ BTS